प्याज खानुका फाईदा,कसरि गर्ने प्याज खेति ?
धेरैजसो मानिसहरु अपचको समस्याबाट हैरान हुन्छन् । यदि तपाईलाई पनि अपचको समस्या छ भने प्याजको सेवन गर्नुहोस् । प्याजको सेवनबाट शरिरमा पाचक रसको प्रवाह धेरै हुन्छ, जसले खाना पचाउन सहयोग गर्छ । साथै तौल नियन्त्रण पनि गर्छ
प्याज खेती गर्दा ध्यान दिनु पर्ने बिषयहरु :
प्याज (Onion) को उत्पादन प्रति रोपनि कति हुन्छ र गानो प्याज उत्पादन र हरियो सागको लागि लगाइएको कुन बाट वढी फाइदा लिन सकिन्छ ?
वाली उत्पादन उपरान्त नोक्सानी हुने कारण के के हुन सक्दछन् ?
प्याज भण्डारण गर्दा सुख्खा, चिसो तथा हावा संचारको पूर्ण संयोजन हुनु पर्दछ।
प्याज काट्दा पिरो ग्याँस फैलिन्छ किन ?
प्याज भण्डारणमा छिट्टै उम्रने÷टुसाउने कारण के हो र यसबाट बच्न के उपाए गर्न सकिन्छ ?
प्याज विक्री गर्नु अगाडी कसरी प्याकिङ्ग गर्नु पर्दछ ?
प्याजलाई कसरी कसरी भण्डारण गर्न सकिन्छ ?
मेलिक हाईड्राजाईडको प्रयोग किन र कसरी गरिन्छ ?
प्याज सुकाउने (Curing) भन्नाले के बुझिन्छ ? यो विधि कसरी अपनाईन्छ ?
प्याज खन्नु भन्दा अगाडी कुन–कुन उपाय अपनाउँदा लामो समय भण्डारण गर्न सकिन्छ ?
प्याज खेतीमा मलखाद व्यवस्थापन कसरी गरिन्छ ?
प्याजमा लाग्ने रोगहरु व्यवस्थापन गर्न प्रयोग गरिने घरायसी विधिहरु के के छन् ?
प्याज खेतीमा कीराहरुको जैविक विधिवाट कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ?
प्याज खेती सम्वन्धि समस्या आइपर्दा कुन कुन निकायहरुमा सम्पर्क गर्नु पर्दछ ?
व्याक्टेरियल नरम सडन (Bacterial Soft Rot) कुन अवस्थामा लाग्दछ र यसका व्यवस्थापन विधिहरु के के छन् ?
प्याजमा लाग्ने डाउनी मिल्डयु (Downy Mildew) रोग कस्तो वातावरणमा वढी फैलन्छ र कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन?
प्याजको वैजनी धब्वा (Purple Blotch) रोगको लक्षण कस्तो हुन्छ र यसको ब्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ ?
प्याज वालीमा देखा पर्ने मूख्य–मूख्य कीराहरु कुन कुन हुन र यसको व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ ?
प्याज वालीमा सिचाई र निकासलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ ?
प्याज खेतीमा आउने झारहरुको व्यवस्थापन कसरी गरिन्छ ?
प्याज खेती गर्दा गोडमेल कसरी र कति पल्ट सम्म गर्नु पर्दछ ?
प्याजलाई राम्रो बृद्धि गराउन कुन कुन विरुवा वर्धक रसायनहरुको प्रयोग गर्न सकिन्छ ?
जैविक विषादी भनेको के हो ? यसको प्रयोगबाट के के फाईदा हुन्छ ?
प्याज खेती गर्दा खाद्य तत्वहरुको के महत्व छ र कुन तत्वको वढी आवश्यकता पर्दछ ?
प्याजको सेट (वीऊ प्याज) कसरी उत्पादन गरिन्छ ?
वेमौसमी प्याज खेती गर्न कुन तरीका अवलम्वन गर्नु पर्दछ ?
यसको खेती कति प्रकारले गर्न सकिन्छ ? कुन तरिकाले खेती गर्दा वढी उत्पादन लिन सकिन्छ?
प्याज खेती गर्दा जग्गाको तयारीमा कतिको ध्यान दिन आवश्यक हुन्छ ?
प्याजको वेर्ना आफै उत्पादन गर्न कुन–कुन कुराहरु ध्यान दिनु पर्दछ ?
प्याजका जातहरु कस्ता कस्ता रंगका पाईन्छन् ?
यसको खेतीका लागि कति विउदर प्रति रोपनि आवश्यक हुन्छ ?
प्याज खेतीका लागि कस्तो स्थान उपयुक्त हुन्छ ?
प्याजको लागि कस्तो माटो उपयुक्त हुन्छ ?
नेपालमा व्यवसायिक रुपमा प्याजको वीउ कहाँ उत्पादन गरिन्छ ? यसको उपलब्धता कहाँ–कहाँ छ ?
भौगोलिक क्षेत्रका आधारमा लगाइने प्याजका कुन–कुन जातहरु उपलब्ध छन् ?
प्याज खेतीका लागि कस्तो हावापानी आवश्यक पर्दछ ?
प्याज चिसो मौसम/हिँउदमा हुने वाली हो । विरुवाको विकासको लागि कम तापक्रम राम्रो हुन्छ भने गानोको विकास हुन तापक्रम केही वढी चाहिन्छ । यसको खेती फस्टाउन तापक्रम, प्रकाश तथा दिनको लम्वाइले विशेष भूमिका खेलेको हुन्छ । स्रोत नेपलपत्र
प्याजको भाउ आकाशियो,२०० रुपैयाँ प्रतिकिलो !
काठमाडौं सहित देशभर प्याजको भाउ ५ सय प्रतिशतले बढ्यो
प्रधानमन्त्रीद्वारा प्याज नखाने घोषणा